Soomaaliya page pageno
Dhismaha waddada Afgooye oo laga shiray
Wakiiladda wadamada Turkey iyo Qatar iyo shirkadda dhisaysay jidka Afgooye iyo Muqdisho ayaa la kulamy, Ra'iisal wasaaraha iyo taliyeyaasha ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
Kooxo hubeysan oo askari ku diley Boorama
Askari ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Awdal ayaa saaka waabarigii koox hubaysani ku duleen deegaanka Afraagaa oo 15 km kaga began dhanka galbeed magaalada Boorama.
Khilaaf ka taagan dhisidda hoggaanka Gal-Mudug
Khilaaf cusub oo ku saabsan dhismaha guddiga doorashada ee hoggaanka maamulka Gal-Mudug ayaa mar kale soo baxay, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb.
ENEZ: Ma joojineyno dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye
Shirkadda ENEZ oo ah shirkad laga leeyahay Turkiga oo dhisaysa jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegtay inaysan joojinayn hawsheeda isla markaana ay dhammaystirayso dhismaha jidkaasi.
ILEYSKA VOA: Islaam Naceybka ka jira Mareykanka
Duqeyn ka dhacday J/Hoose 'oo lagu dilay' saddex Shabaab ah
Wararka ka imanaya Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqayn ay shalay ka dhacday degaanka Bangeeni oo ku taal degaan u dhexeeya Jamaame iyo Koban.
Soomaali lagu dilay xero qaxooti oo ku taalla Greece
Wiil Soomaali ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay xero qaxooti oo ku taalla dalka Greece. Qaar ka tirsan qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ayaa sheegay in dadka xerada ku jira oo dalal kala duwan ka soo jeeda ay mararka qaar rabshado ka dhex dhacaan
Wararkii ugu danbeeyey ee qarax ka dhacay Afgooye
Qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Afgooye ayaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen shaqaale Turki ah oo ka shaqeynayay dayactirka wadada Afgooye. Saddex qof oo Soomaali ah oo ay askar ku jiraan ayaa ku dhintay weerarkaasi.